Tolotra asa: Mpiaro ny mpamatsy vola - Afriland First Bank Kamerona - TELES RELAY
Afriland First Bank Cameroon mitady mpanampy 02 Mpanampy mpahay vola. Napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny Lehiben'ny trano fitantanan-dramatoa, ny asa lehibe indrindra ataon'izy ireo dia ny mivarotra vokatra ara-tsenam-bola mba hamolavola ny tombony sy ny portfolio.
Ny mombamomba ny kandidà mety:
Ny banky Kameroney dia maniry ny hisolo toerana ity kandida ity izay manana fiofanana BAC + 5 farafahakeliny ambany indrindra amin'ny sehatry ny fitantanam-bola / fitantanana / varotra / toekarena. Ho fanampin'izany, ny traikefa 02 taona dia takiana amin'ny fiasa na mitovy ho an'ny mpikarakara orinasa. Ankoatr'izay, ny mpilatsaka hofidina dia tsy maintsy manana fahalalana momba ny fitantanana ny risika sy ny vokatra amin'ny rakitra.
Valiny nataon'i Dan Gertler sy Banky Afriland Voalohany: fitarainana milaza ...
AFRILAND DIA VOLOTRA BANK CAMEROON REPRUITS HENT AGENTS HOST
Voatonona amina raharaha hosoka ao amin'ny DRC, ny vondrona Afriland an'ny…
Fe-potoana fampiharana: 17 Jolay 2020
maka hevitra Afriland First Bank tolotra asa.
Senegaly: Famandrihan-toeran'ny La Somone dia atahorana tetikasa hotely
Nchout Ajara Njoya: "Tiako kokoa ny fanemorana CAN"